မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အတွေ့များတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ - Hello Sayarwon
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးကျန်းမာရေး » ကလေးတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn | ရေးသားသူ Ye Myo Myat
Update Date စက်တင်ဘာ 3, 2021 .4mins read
မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ ရှိတဲ့ ကလေးကို အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ပေးရမလဲ။ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဆောင်းပါးထဲ ဖတ်ကြည့်နော်။
နှလုံးနှင့်သွေးကြော ကျန်းမာရေး, မွေးရာပါနှလုံးရောဂါများ ဩဂုတ် 27, 2021 .2mins read
ဘယ်လို ဗိုက်အောင့် ခြင်းတွေက အရေးပေါ်ကုသမှု လိုအပ်သလဲ။